Home Wararka Amniga Magaalada Muqdisho oo faraha kabaxay+Dilalka iyo Qaraxyada oo Joogta ah
Amniga Magaalada Muqdisho oo faraha kabaxay+Dilalka iyo Qaraxyada oo Joogta ah
Magaalada Muqdisho ee caasimada Somalia ayaa bishaani ramadaan marti galineysa Dilal iyo Qaraxyo nooca lagu xiro gaadiidka raaxada.
Dilalka ugu badan ee Bishaani Ramadaan ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga kala fuliyay Afar Degmo oo la rumeysan yahay inay ka jirto amni darro weyn.
Dilalka iyo Qaraxyada ayaa horseed u ah Dayacnaanta dhanka maamulka iyo ciidamada ka howlgala Degmooyinkaasi, waxaana xusid mudan inaanu jirin xitaa hadalo kasoo baxa maamulka Degmooyinkaasi xiliyada ay dhibtu dhacdo.
Degmooyinka ugu halista badan Bishaan ramadaan ayaa waxaa kamid ah Degmada Waabari, Boondheere, Dharkiinleey iyo Degmada Howlwadaag oo qeybteeda xigta bakaaraha ay ka dhacaan dilalka ugu badan.Xasan Cali Kheyre ayaa maalmo un ka hor ku goodiyay inaanu xilka sii heyn dooni Guddoomiye Degmo oo aan ka adkeyn amniga Degmadiisa.
Si kastaba ha ahaatee, amni darada kasoo ifbaxeysa afartaasi Degmo ayaa cudur daar u noqon doonta ka dhabeynta goodinta uu jeediyay Kheyre.